Ihe ọkpụkpọ Sax Video ngwa niile maka gam akporo [App] - Luso Gamer
Ihe ọkpụkpọ vidiyo Sax niile bụ ihe nbudata Apk maka gam akporo [App]
Ma ị na-eji ekwentị ochie gam akporo ma ọ bụ nke kachasị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu na-akpọ videos ruru dị iche iche faịlụ formats. Mgbe ahụ echegbula n'ihi na ebe a anyị na-azụ na a ịrịba player a na-akpọ Sax Video Player All Format Apk.
N'ezie, nke video Editor na Player bụ free ibudata na anyị website na-achọghị ndebanye aha ma ọ bụ ndebanye aha. Ọzọkwa ịwụnye ngwa agaghị arịọ maka ikike na-enweghị isi. Nke pụtara na ndị egwuregwu ga-enwe nkwanye ugwu echekwara.
A na-ewere usoro ntinye na ntinye nke ngwa dị mfe. Agbanyeghị, n'ịtụle enyemaka onye ọrụ, ebe a, anyị ga-atụle usoro isi niile na nkenke. Yabụ na-amasị gị njirimara pro nke faịlụ ngwa wee budata Sax Video Player All Format App.
Kedu ihe bụ Sax Video Player All Format Apk
Ihe ọkpụkpọ vidiyo Sax niile bụ ngwa ntanetị gbakwunyere ndị na-egwu vidiyo na ntanetị na ndị ndezi nke D-Cube Mobile mepụtara. Ebumnuche nke ịhazi ngwa a bụ iji nye ebe nchekwa. Nke ahụ na-enye ndị ọrụ gam akporo ohere ịkpọ faịlụ vidiyo usoro niile.
Mgbe anyị nyochara ma nye ozi enwere ike iru. Mgbe ahụ, anyị chọpụtara na nkà na ụzụ na-aga n'ihu ngwa ngwa na n'ihi ọganihu a siri ike. Achọpụtara faịlụ ọhụrụ na usoro iji jikwaa faịlụ vidiyo nke ọma na nke ọma.
Ọ bụ ezie na a na-ewere mgbanwe ndị yiri ya dị ka ezigbo ụzọ nke ndị ọkachamara. Mana a bịa na ndakọrịta ekwentị karịa ọtụtụ ndị ọrụ ama nwere ike enweghị ike ịme faịlụ ndị ahụ. Ihe kpatara ya bụ n'ihi ndakọrịta na usoro faịlụ.
Ọbụna smartphones ochie na nke oge ochie na-enweghị nhọrọ nke ịgụ faịlụ. Ya mere na-elekwasị anya na ndị ọrụ Android na nkasi obi ha. Ndị mmepe mechara weta ngwa mkpanaka a dị egwu nke a maara dị ka Sax Video Player All Format Android.
aha Ihe ọkpụkpọ vidiyo Sax niile
Mmepụta D-Cube Mobile
Aha ngwugwu com.simplemobiletools.gallery.dcube
Nke bụ n'efu ibudata na webụsaịtị anyị na-achọghị ndenye aha. Ewezuga ịkpọ faịlụ vidiyo, ndị mmepe ahụ na-akụnyekwa njirimara pro ndị ọzọ n'ime. Ndị ahụ gụnyere Play Play, Ntụgharị, Playlist Generators, Checklist, Custom Video Player and more.
Mgbakwunye kacha nke ndị ọrụ ga-ahụ n'anya bụ nhọrọ ọchụchọ webụ arụnyere. Ewezuga ịkpọ vidiyo na ịchọgharị n'ịntanetị. Na mgbakwunye, ndị ọkachamara gbakwunyere nhọrọ ụlọ ahịa ịntanetị a. Site na nke ndị Fans nwere ike ibudata faịlụ dị iche iche gụnyere vidiyo.
Maka ịchọ na nyocha ịntanetị, njikọ ịntanetị kwụsiri ike nwere ike ịchọ. Mba, ọ bụrụ na ị dị mma na iyi na-anọghị n'ịntanetị wee chọpụta ọtụtụ vidiyo na-enwe ọrịre na nkwanye ugwu. Cheta na ọrụ agaghị achọ ndenye aha ma ọ bụ ndebanye aha.
The dakọtara formats na video player na-akwado bụ MP4, MKV, WMV, TS, 3GP, WEBM, AVI, MOV, wdg Ke adianade do, mmepe kwukwara a 4K ebre mma n'ime. Nke a pụtara ugbu a ndị ọrụ mkpanaka na-enwe nsogbu ịkwanye vidiyo 4K.
Nwere ike ịnụ ụtọ ndị ahụ n'ụzọ dị mfe na-enweghị nguzogide ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla. Naanị họrọ faịlụ vidiyo na-ebugharị ngwa ngwa na 4K na-enweghị ịchọpụta nsogbu ndakọrịta. N'ihi ya, ị hụrụ njirimara pro ndị a niile ma dị njikere ibudata wee nweta Sax Video Player All Format Download.
Agbakwunyere dashboard zuru oke.
Ịwụnye ngwa na-akwado ọtụtụ usoro vidiyo.
Ndị na-agụnye MP4, MKV, WMV, TS na ndị ọzọ.
Nhọrọ igwu egwu vidiyo gbakwunyere ọdịyo.
Otu esi ebudata Sax Video Player All Format Apk
Enwere ike ịnweta faịlụ ngwa ugbu a site na Ụlọ Ahịa Play. Mana n'ihi isi okwu ụfọdụ, a na-ekewa ya ugbu a na ngalaba mgbochi. Nke pụtara na ọ bụ naanị smartphones tozuru oke ka a na-ahapụ ịnweta faịlụ Apk ozugbo.
Yabụ na-atụle ohere ịnweta faịlụ ngwa, anyị na-akwado ndị ọrụ android gaa na webụsaịtị anyị. N'ihi na ebe a n'elu ikpo okwu anyị, anyị na-enye naanị ezigbo na mbụ Apk faịlụ. Ka ibudata Sax Video Player Review biko pịa njikọ dị n'okpuru ebe a.
Faịlụ ngwa anyị na-ewepụta ebe a taa bụ nke izizi. Nke pụtara na ọ dakọtara na ekwentị Android niile. Ọbụlagodi tupu ịnye ya n'ime ngalaba nbudata, anyị etinyelarị ngwa ahụ na ngwaọrụ dị iche iche ma ọ nweghị nsogbu ọ bụla.
A na-ebipụta ọtụtụ ihe ọkpụkpọ vidiyo ndị ọzọ na faịlụ ngwa ndị editọ metụtara. Nke dị mma n'ihe gbasara ojiji na ndakọrịta. N'ihi ya, ị dị njikere iji ohere ahụ wee wụnye ngwa ndị a. Kedu ndị bụ YTV Player Apk na Tempo Pengantin ngwa ngwa.
Nke a bụ ohere kacha mma maka ndị ọrụ ama ama gam akporo niile ka ha nwee ọ enjoyụ na ntinye vidiyo dị ụtọ. Iji nweta Sax Video Player All Format Apk biko pịa bọtịnụ nbudata n'okpuru. Na-anụ ụtọ nkwanye ugwu na-adịghị agwụ agwụ n'efu na-enweghị ndenye aha ma ọ bụ ndebanye aha.
Categories Video Player & Editors, Apps Tags Sax Video Player niile usoro gam akporo, Ihe ọkpụkpọ vidiyo Sax niile bụ APK, Ngwa ihe ọkpụkpọ vidiyo Sax niile, Ihe ọkpụkpọ vidiyo Sax niile nbudata, video Editor Mail igodo
Budata Lynx Remix Apk 2022 maka gam akporo [Kik]
Mod Nhọrọ Dimas FF ngwa Download N'ihi na android [FF Diamonds]